You are here: Home RESOURCES Business Matching အမေရိကန်နိုင်ငံသံအမတ်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
Print	| Email	| Hits: 972
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ (၁၁း၃၀)အချိန်တွင် မန္တလေးမြို့ ၂၇လမ်းနှင့် ၆၄ လမ်းထောင့်ရှိ India Tadaka (Fine Dining and Bar) တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် Work-Shop တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ Mr.Scot Marciel (Ambassador of the United States of America)၊ Mr.Mark Maloney (Political Officer) တို့နှင့် MRCCI မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မင်း၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာမောင်မောင်၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးသက်ထွန်းလင်း၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးညွန့်ဝေ(ခ)ဦးချွန်၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးစိုးသိန်း၊ အလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝင်းမြင့်အောင် တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် နိုင်ငံရေးနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြောင်းလဲအသုံးချလျှင် စီးပွားရေးပိုမိုဖြစ်ထွန်းလွယ်ကူ ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက် (၁၇၀)မှ (၁၃၀)အထိ လျှော့ချရာတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပိုမိုများပြားလာနိုင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရခိုင်အရေးအခင်းကြောင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ပက်သက်၍လည်း ဘဏ်အတိုးနှုန်းကို သီးခြားသတ်မှတ်မထားသင့်ဘဲ အနေအထားအလိုက် ပြောင်းလဲလျှော့ပေါ့ ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်း စသဖြင့် ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြပြီး ဆွေးနွေးပွဲအား နေ့လည် (၁း၀၀)နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားခဲ့ပါသည်။
Vacancy announcement, we are hiring 'business development manager'.
Vacancy Announcement We are hiring! Job Title : Business Development Manager (1 Post) Job Requirements • Only Myanmar Citizens • Strong analytical business intelligence capabilities and operation experiences • University degree and Preferable... Read More...
MANDALAY INT’L TRADE FAIR & BUSINESS FORUM 2019 ပွဲအတွက် အချက်အလက်များကို www.mdyitfbf.com တွင် လေ့လာနိုင်
MANDALAY INT’L TRADE FAIR & BUSINESS FORUM 2019 မှ ကြိုဆိုပါတယ် အထက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့... Read More...